7 Calaamadood Oo Lagu Garto Uurka Bilowga Ah - iftineducation.com
7 Calaamadood Oo Lagu Garto Uurka Bilowga Ah
aadan21 / January 24, 2014
iftineducation.com – Caadada oo istaagta: Calaamooyinka lagu garto uurka bilawga ah tan ugu caansan, uguna saxsani waxa weeye caadada oo joogsata. Waxaa marmar dhif ah dhacda in dumarka qaar ay dhowr jeer caadadu ka timaado inta ay uurka leeyihiin, ha yeeshee sida caadiga ah caadadu waa ay istaagtaa kolka uurku billowdo.
-Ilma-galeenka oo ballaarta: Mar kasta oo uurjiifku sii weynaadaba ilma-galeenku waa uu sii ballaartaa, dhakhtarkuna qalabkiisa gaarka ah ayuu arrintaasi kula socdaa, ha yeeshee haweeneyda uurka lihi ma dareento inta uu ilma-galeenkeedu weynaanayo.
-Matagga subaxdii: Matagga subaxdii ay haweeneydu matagto waa calaamad kale oo lagu garan karo uurka.
-Ibaha naasaha oo midabbaysta: Ibaha naasuhu bilaha dambe ee uurka waxay yeeshaan midab aad u madoow.
-Caloosha oo buurata:Dumarka kuwooda khibradda yari waxay u qaataan in usbuuca horeba caloosha buurani ay uur sheegayso, mana garanayaan in aan uurjiifka caloosha laga dul garan karin ilaa laga gaaro bisha shanaad.
-Dhaqdhaqaaqa uurjiifka:- Dareeraha lagu magacaabo (Aminotic) ayuu uurjiifku u dhex dabaashaa sidii rah berkad biyo ah ku dabaalanaya oo kale.
-Wallaca iyo degganaan la’aanta: Waxaan shaki ku jirin in isbeddellada ku dhaca dhiiggu ay reebaan degganaan la’aan maskaxeed iyo mid nafsiyadeed intaba, arrinkaasi oo haweenka intooda badani u fasirtaan inuu yahay uur bilawgiis.
Daawo Video: Xuska Maalinta Xijaabka Aduunka Iyo Dumar Badan Oo Isku Diyaarinaya
Talooyin ku socda haweenka aan uurka qaadin